Shiinaha YH-ZD-150 soosaarayaasha iyo alaab-qeybiyeyaasha | Yixin
Magnetic All Poseline Automatic TIG Mashiinka Alxanka
Taxanaha YH-ZD-150 Tungsten Inert Gas alxanka） Mashiinka TIG alxanka is waa badeecada ugu weyn ee Tianjin Yixin Pipe Equipment Co., Ltd. Waxay dhexgashaa noocyo kala duwan oo teknoolojiyada alxanka otomaatig ah isla markaana ku habboon alxanka tuubooyinka dhuuban ee khafiifka ah birta kaarboon ka sameysan, birta ka sameysan birta, birta titanium iyo waxyaabo kale.
Mashiinka Alxanka otomaatiga ah ee TIG
Mashiinka caadiga ah ee walxaha argon arc waa adag tahay in la hubiyo tayada alxanka, halka mashiinka alxanka ee TIG oo dhan uu leeyahay tayo alxamid sare leh iyo qaab alxamid weyn, kaas oo la kulmi kara heerarka kormeerka aadka u sarreeya.
Nidaamka alxanka ee TIG alxanka tooska ah, hadda alxanka, danab alxamida, xawaaraha quudinta siligga iyo xuduudaha kale ee ka ciyaara doorka go'aanka natiijada alxanka ayaa aad u deggan. Tayada alxanka ayaa saameyn yar ku leh arrimaha bani'aadamka, sidaas darteed muuqaalka alxanka ayaa ah mid aad u fiican tayada alxamiduna waa sarreysaa.
Madaxa alxanka TIG ee iskiis u horumarsan waa mid fudud oo la qaadan karo. Madaxa oo dhan wuxuu adeegsadaa aluminium duulimaad si jirka looga dhigo mid khafiif ah si loo yareeyo isticmaalka jirka ee dhismayaasha. Madaxa waa fududahay in la rakibo, ku habboon oo dhakhso leh.
Faa'iidooyinka alxanka TIG ee otomaatiga ah: alxamid tayo sare leh, isugeyn xoog leh, xoog isugeyn sare, muuqaal qurux badan, oo aan lahayn walxo ku fida alxanka, iwm
TIG alxanka tooska ah wuxuu si buuxda u muujinayaa astaamaha xawaaraha sare iyo waxtarka sare sababtoo ah heerka sare ee otomaatiga. Isla mar ahaantaana, iyada oo ay ugu wacan tahay hagaajinta xawaaraha alxanka, waqtiga buuxinta argon gudaha ah si weyn ayaa loo dhimay oo isticmaalka gaaska argon waa la keydiyay.
Qaabeynta aasaasiga ah ee qalabka alxanka YX-ZD-150 TIG
• dhigay madaxa alxanka TIG
• dejinta nidaamka xakamaynta awoodda la soo dejiyo
• qayb ka mid ah kontoroolka fog ee wireless-ka
• dhigay haanta biyaha 10-20L
Nidaamka xakamaynta awooda
Qaadashada ilaha tamarta alxanka ee SanRex TIG, oo leh sheeko AC VR ah iyo waxqabadka aluminiumka la hagaajiyay, 30 qiyaasta alxanka shaqeynta keydinta. Gudiga xakamaynta ayaa cad oo fududahay in la xakameeyo.
Multi-function controler fog
Nidaamyada shaashadda shaashadda shaashadda midab-qeexidda sare ayaa si cad loogu soo bandhigi karaa deegaan kasta. Iyada oo loo marayo koontaroolka fog ee shaashadda taabashada, xuduudaha alxanka sida dhererka, bidix iyo midig, ballaadhinta baaxadda, xawaaraha socodka, xawaaraha feed siligga iyo hagaajinta dhererka qaansada inta lagu guda jiro alxanka waxaa lagu xaqiijin karaa iyada oo loo marayo shaashada taabashada fog, iyadoo la adeegsanayo hagaajinta iyo hawlgalka fudud.
Halbeegyada Farsamada head Madaxa otomaatiga ah ee TIG
Cabirka madaxa (L * W * H)
400mm * 360mm * 300mm （oo leh silig quudiyaha）
Istaroog shaqo shaqeynaya
Xawaaraha Quudinta Cunnada
0-2m / daqiiqo
0-500mm / daqiiqo
Ku lulid waqtiga bidix iyo midig
0-1000ms la hagaajin karo
Kor iyo hoos u garaaca qoriga alxanka
1.0-1.2 Ballaca Ballaca Ballaca: 200mm 3 kiilo garaam
Ku habboon birta kaarboon, birta daawaha ah, birta birta ah, birta birta ah ee birta ah, aluminium birta diidan iyo aluminium-magnesium-ka, macdanta naxaasta iyo naxaasta ah, titanium iyo titanium daawaha, iwm.
Xagga sare 125mm
6 saac-12, 12 saac-6 saac
Groove lagu dabaqi karo
Jeexdin V-qaabeeya, jeexdin V-qaabeeya labalaab
Halbeegyada Farsamada: Awood Siinta
Saddex waji 380V ± 10%
Awoodda Wax-soo-saarka Lagu Qiimeeyay
Soo Saarista Qiimeysan
Muddo Xaddiga Xamuulka
Qaboojinta biyaha qasabka ah Qaboojinta biyaha qasabka ah
325 * 591 * 520 （marka laga reebo siddo）
340 * 860 * 557 （marka laga reebo siddo）
Miisaanka saafiga ah （kg）
Hore: Nooca xiran alxanka madaxa
Xiga: YX-150 PRO